काठमान्डौको डान्स बारमा खुलेआम लुट, सोझा साझा यसरी ठगिदै ( भिडियो सहित ) – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमान्डौमा रहेको डान्स रेस्टुरेन्टको लुट को धन्दा धेरै कमलाइ मात्र थाहा होला। हर कोहि जाने नपर्ने यस्तो ठाउमा कसरि मानिस ठगिञ्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हर कोइ लाइ थाहा हुदैन तर जब केहि कारण बस डान्स रेस्टुरेन्टमा छिर्यो भने ठगियो।
काठमान्डौ पुग्ने सोझासाझालाई ठग्न अनेक आइडिया लगाएर दलाल नै बजारमा फैलाएका हुन्छन। झुक्किएरै भएपनि रेस्टुरेन्ट मा छिरेपछि जुस होस् या सादा पनि जे सुकै लिएपनि ठगिने पक्का छ। डान्स बार पसेपछि खादै नखाएको हजारौको बिल आउने गर्छ। जबर्जस्ति जसरि भएपनि जहाँ बाट ल्याएर भएपनि तिर्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। यसरि नै राहदानी नविकरण गर्न काठमान्डौ पुगेका सल्यानका केशवहादुर खत्री डान्स बारबाट ठगिएका छन्। डान्सबारबाट कस्तो हुन्छ भन्ने समेत थाहा नभएका उनलाई झुक्याएर लगेर डान्सबार भित्र लुटिएको छ ।
घण्टाघर वरपर सस्तो होटल खोज्दै हिडेका उनलाई सस्तो र राम्रो होटल मिलाई दिने भन्दै केहि व्यक्तिले डान्स बार पुर्याए। जवरजस्ती एक गिलास जुस खुवाएर साथमा रहेको ५ हजार रुपैया धम्क्याएर लुटे ।
आफ्नो पैसा लुटिएपछि प्रहरीको मा गुनासो गर्न पुगेपनि केहि गर्न नमिल्ने भन्दै उन्लाई घर जान सुझाव दिइयो। ति सोझा व्यक्ति पैसा प्रहरीको सहयोगमा नउठ्ने देखेपछि सिधा कुरा जनताको कार्यालय पुगे। आफ्नो डान्सबारको बारेमा खबर बन्न थालेपछि र खोजि हुन थालेपछि आफ्नो स्टाफ बाट गल्ति भएको र आफु भएको भए यस्तो नहुने भन्दै सिधा कुरा जनताको कार्यालयमै पुगेर रेष्टुरेन्ट सञ्चालक क्षीतिज लामा उनिहरुको तर्फबाट माफी माग्दै लुटिएका केशवहादुर खत्रीको पैसा फिर्ता गरिदिए ।
यो घटना र यी पात्र त यो सहर मा हुने ठगि र लुट को एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्तो घटना हर रात हर डान्सबारमा कति नेपाली त् कति बिदेशी माथि हुने गर्छ। कतिले उजुरी गर्छन कतिले केहि हजार माया मार्छन तर उजुरी गर्दैनन्। यसरि देशकै राजधानी मा दिन दहाडै एक सोझो गरिब नेपालीको छोरो लुटिन्छ । भिडियो हेर्नूहोस।
Prev“द भ्वाईस अफ नेपाल” को आजको ब्याटल राउडमा यस्तो भिडान्त चलेपछि (भिडीयो सहित)
Nextनेपाल पुलिसको बहादुरी , अपराधीलाई भारतमै गएर यसरी समात्यो !! भारतभर भयो यस्तो हंगामा ( भिडियो सहित )
महिनावारी भएका बेला अत्यधिक पीडा हुन्छ ? – पिडा कम गर्न अपनाउनुस् यी घरेलु तरिका…
सुन-चाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको मूल्य हेर्नुहोस।